Iincwadi ezilungileyo malunga neArduino | izixhobo zasimahla
Iincwadi ezili-12 ezizezona zibalaseleyo kwi-Arduino zokuyilawula ngokupheleleyo le bhodi kunye nenkqubo yayo
UIsake | 10/05/2022 09:00 | Arduino
Ukuba ujonge ukuyiqonda ngokupheleleyo iArduino yezixhobo zasimahla kunye neqonga lophuhliso, kunye ne-IDE yayo kunye nenkqubo, kuya kufuneka wazi ezinye ezona ncwadi zibalaseleyo malunga neArduino ehleliweyo kwaye engamelanga ingabikho kwithala lakho leencwadi. Imisebenzi yobugcisa yakho ye-elektroniki ngale nto ibhodi nge microcontroller Yekani ukunifihlela izinto ezifihlakeleyo. Ukongeza, uya kuba nako ukufunda indlela yokudibanisa i Izinto zombane kwiiprojekthi zakho ze-DIY ngokufanelekileyo, amakhaka akhoyo kunye nezixhobo, kunye nokunye okuninzi.
1 Arduino ngobunzulu
2 Amaqhinga eArduino kunye neeMfihlo
3 Funda i-elektroniki ngeArduino
4 I-Intanethi yezinto (IoT) kunye neArduino
5 Iirobhothi kunye neSiseko seKhaya eliziSebenzisayo kunye neArduino
6 Umncedisi kaGoogle: Uphuhliso lwezicelo ze-IoT zeArduino kunye ne-ESP8266
7 I-Alexa: Uphuhliso lwezicelo ze-IoT ze-Arduino kunye ne-ESP8266
8 Uphuhliso lwezicelo ze-IoT kwilifu kunye neArduino kunye ne-ESP8266
9 Funda Arduino ngempelaveki
10 I-Arduino ngaphandle kolwazi lwangaphambili: yenza iprojekthi yakho yokuqala ngeentsuku ze-7
11 Funda iArduino, iprototyping kunye nenkqubo ephucukileyo enemithambo eli-100
12 IArduino Handy Edition 2022
Arduino ngobunzulu (IZIHLOKO...
Un incwadi yokufunda arduino, kunye nemizekelo emininzi ebonakalayo ukuqalisa ukwenza iiprojekthi zakho zokuqala ze-elektroniki ekhaya. Yincwadi elula, enzulu ukuya kwinqanaba elingekho phambili kakhulu, kodwa ngokwaneleyo ukuqala nokufunda indlela i-electronics, iikhomputha, njl njl. Ukongezelela, inomxholo wokukhuphela kwi-Anaya Multimedia indawo, njengemizobo yezenzo, ikhowudi ye-Arduino IDE, njl.
Amaqhinga eArduino kunye neeMfihlo
Arduino. Amaqhinga kunye...
Enye yezona ncwadi zibalaseleyo kwiArduino yilena enayo unokwenza iiprototypes ezininzi ezahlukeneyo, ukusuka kwiisekethe ezilula ezine-LED, ukuya kwi-thermostats, i-Arduino-based 3D printer, i-drones, iirobhothi, njl. Ngamaqhinga angaphezu kwe-120 kunye neemfihlo zokuba yingcali yeArduino ngendlela eyonwabisayo nesebenzayo.
Funda i-elektroniki ngeArduino
Funda izinto zombane nge...
Enye yeencwadi ezilungileyo zeArduino ukufunda i-elektroniki. Ngamanye amazwi, ine-orientation eyahlukileyo, igxile ekufundiseni malunga ne-electronics usebenzisa le bhodi ye-hardware yasimahla njengesixhobo. Inemifanekiso engapheliyo kunye nemizekelo yombala elula ukuyiqonda, izikhokelo zesinyathelo-nge-nyathelo zokwenza iisekethe zakho zokuqala ze-elektroniki, ufunde ukuphatha isinyithi se-soldering, uthathe imilinganiselo nge-multimeter, ufunde malunga nemizobo yesekethe, njl.
I-Intanethi yezinto (IoT) kunye neArduino
I-Intanethi yezinto ...
El I-Intanethi yezinto (IoT), yinto ephambili kakhulu ngenxa yezicelo enokuba nazo, ukusuka ekubekeni iliso okanye ukuthatha imilinganiselo kude, ukuya kwizixhobo zokulawula, ngokwenza iinkqubo ezininzi zokwabelana ngolwazi okanye ukusebenzisana. Ewe, le ncwadi igxile ngokuchanekileyo, kwindlela yokudala iiprojekthi ze-IoT usebenzisa ibhodi ye-Arduino yokulawula. Kuyo uya kubona imizekelo emininzi yokusebenza ngoqhagamshelo olungenazingcingo okanye lwenethiwekhi, ukulawula iiprojekthi usebenzisa i-smartphone yakho, njl.
Iirobhothi kunye neSiseko seKhaya eliziSebenzisayo kunye neArduino
Iirobhothi kunye neKhaya elizisebenzelayo...
Okulandelayo kuluhlu lweencwadi zeArduino sesi sihloko. Ikopi eneendlela zokukwenza ukuba uqalise kwihlabathi le iirobhothi ezibalulekileyo kunye ne-automation yasekhaya. Isenokuba yincwadi elungileyo kubafundi abaphakathi okanye abaphezulu abaqeqeshelwa umsebenzi. Yonke imizekelo isekwe kwibhodi ye-microcontroller eyaziwayo, kwaye yonke into icaciswe kakuhle, kunye neschematics, iikhowudi, njl. Ke kwiinkqubo ezingama-28 zizonke onokuthi uzenze ngokwakho.
Umncedisi kaGoogle: Uphuhliso lwezicelo ze-IoT zeArduino kunye ne-ESP8266
Kwaye ukuqhubeka ne-IoT, le yenye incwadi ecetyiswayo yeArduino. Incwadi ekulula ukuyiqonda ukuze uqalise ukusuka kwizinto ezisisiseko ukuya kwi-complex, usebenzisa iibhodi ze-Arduino, imodyuli ye-ESP8266, kunye ne-Arduino IDE. Ingcamango kukuba ukwazi ukuyila iiprojekthi ezinokulawulwa yimiyalelo yelizwi. usebenzisa umncedisi wenyani kaGoogle.
I-Alexa: Uphuhliso lwezicelo ze-IoT ze-Arduino kunye ne-ESP8266
Alexa. Uphuhliso lwe...
Kwaye njengenye into encedisayo, okanye enye kwenye yangaphambili, kukwakho nenye incwadi enenjongo efanayo kwaye ikwingqokelela efanayo. Kuphela ukuba iiprojekthi ze-IoT eziboniswe njengomzekelo kule meko zijoliswe ukuba zilawulwe kunye nomncedisi odumileyo wenyani Amazon: Alexa. Ngaphandle koko, yabelana ngezinto ezininzi kunye nencwadi yangaphambili.
Uphuhliso lwezicelo ze-IoT kwilifu kunye neArduino kunye ne-ESP8266
Enye yeencwadi I-Arduino kunye ne-ESP8266 emiselwe ihlabathi le-IoT. Kule meko, igxininise kwifu, ukukwazi ukudala iiprojekthi kwaye udibanise kwilifu usebenzisa iiprotocol ezifana ne-HTTP, i-MQTT, ufunde malunga ne-architectures ye-server-server, ukupapasha-ukubhalisa, i-REST, njl. Yonke into icaciswe inyathelo ngenyathelo kwaye ngendlela elula. Zonke izenzo zinezicelo kwiinkalo ezininzi, ukusuka kumayeza, kumashishini, izithuthi, icandelo lamandla, ezolimo, izixeko ezihlakaniphile, i-automation yasekhaya, njl.
Funda Arduino ngempelaveki
Funda iArduino ngempelaveki...
Njengoko igama layo libonisa, yincwadi elula onokuthi ufunde ngayo iziseko zeArduino ngexesha elifutshane. Musa ukukhangela incwadana yemigaqo ukuze unzulu kuyo, kodwa kunoko incwadi elula kubaqalayo abafuna ukufumana iikhonsepthi ezisisiseko kwaye baqale ukuqonda iiprojekthi. Uza kufunda oko kufuneka uqale, yintoni i-Arduino, indawo yophuhliso lwe-IDE, qala ngeeprojekthi ezilula ezisebenzayo kunye ne-LED, i-pushbuttons, i-potentiometers, i-sensor, njl.
I-Arduino ngaphandle kolwazi lwangaphambili: yenza iprojekthi yakho yokuqala ngeentsuku ze-7
Arduino ngaphandle kolwazi ...
Enye yeencwadi zeArduino eziza kugqanyiswa. Imalunga ne a 2 in 1, apho ukufunda ukusuka ekuqaleni, kwi-hardware esisiseko kunye nofikelelo lwesoftware. Zonke zicaciswe ngendlela elula kakhulu, ukwenza ukuba iqondakale nakwabo bangenalwazi lwangaphambili okanye imfundo. Ngomxholo osebenzayo, ukuphonononga izinto ezibalulekileyo ze-elektroniki, malunga neprogram, malunga ne-Arduino IDE, kunye nesahluko esinezinye iimpazamo eziqhelekileyo kunye nesisombululo.
Funda iArduino, iprototyping kunye nenkqubo ephucukileyo enemithambo eli-100
Ilandelayo yeencwadi ze-Arduino yile sihloko. Isihloko sokufunda iikhonsepthi ezinzima ngakumbi yeprogramu, iprototyping kunye ne-electronics, efana nokuphazamiseka kwe-hardware, i-electronic mastering kunye neprogramming, ukuhlolisisa eyona misebenzi inzima, kunye nokuzivocavoca okusebenzayo okumalunga ne-100 onokufunda ngayo ngendlela eyonwabisayo nekhawulezayo kunezinye iindlela zethiyori.
IArduino Handy Edition 2022
Okokugqibela, unayo le ncwadi kuhlelo lwayo luka-2022, oluselukhulu njengohlelo lwayo lwangaphambili. Kuyo unokufunda malunga neArduino ngendlela esebenzayo ngokupheleleyo, kunye neeprojekthi. Awudingi ukuba nolwazi lwe-elektroniki okanye inkqubo, uya kufunda kancinci kancinci ngokusekwe kwimisebenzi. Ngayo yonke into echazwe kakuhle ngesinyathelo ngesinyathelo, ulwimi oluqondakalayo, imifanekiso kunye nemizobo, njl. Indlela entle yokuqalisa ngale bhodi yophuhliso kwaye uvumele ukucinga kwakho kubaleke ukuphuhlisa iiprojekthi zakho ze-DIY ngaphaya kwemizekelo ekule ncwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Arduino » Iincwadi ezili-12 ezizezona zibalaseleyo kwi-Arduino zokuyilawula ngokupheleleyo le bhodi kunye nenkqubo yayo
CNC lathe iintlobo kunye neempawu
Ii-oscilloscopes ezilungileyo zeeprojekthi zakho ze-elektroniki
Fumana amanqaku akutshanje kwi-Hardware.
Uvavanyo lwesiNgesiVavanya isiCatalanImibuzo yeSpanish